Kallacha - Wikipedia
Kallachi meeshaa aadaa Oromoo kan addarratti godhatamu yoo ta'u kallacha kan godhatu warra dhiiraati. Kallachi meeshaa nageenya fi araaraati, kanaafis meeshaalee aadaa kamiyyuu caalaa kabaja guddaa qaba. Yeroo baayyee, namni kallacha godhatu, bokkuu kan mallattoo abbaa aangumma agarsiisus qabatee deema.
Kallachi kan godhatamu addarratti yoo ta'u kan godhatus namoota umuriidhan bilchaatee fi angafa gosaa ta'edha. Kallachi kan godhatamu faayummaaf odoo hin taane sirna aadaa Oromoo keessatti hiikaa mataasaa waan qabuufi. Kunis nageenyaa fi araara buusuuf tajaajila.
Dhufaatiisaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Oromoon kallacha Waaqatu kenne jedhee amana. Waaqayyo kanas kan godhu bakakkaatti fayyadamuudhaan kallacha Oromoof buusa. Waaqni kallacha kan Oromoof kenneef meeshaalee kanatti fayyadamuun Oromoon nagaa fi seera eegee akka jiraatu gochuufi. Akka manguddoonni jedhanitti, kallachi sibiilarraa hojjatama, sibiilli kunis biyyoo bakka bakakkaan itti bu'erraa fudhame irraa argama. Sababa kanaaf, Oromoon kallachaaf kabaja guddaa kennaafi. Namni kallacha keewwatee deemu 'Abbaa Kallachaa' jedhama, namni bokkuu qabatu ammoo 'Abbaa Bokkuu' jedhama.
Bara durii, kallacha akaakuu lamatu jira ture: kallacha kormaa fi kallacha laafaa. Kallachi kormaan meeshaa ittiin nama abaaran yoo ta'u sababa kanaaf baayyee sodaatama. Kallachi kormaan kan tajaajilu nagaa buusuu fi ayyaaneffata amantii fi hawaasummaa raawwachuufi. Karaa biraa, kallachi laafaan akka mallattoo kabajaa fi qajeelummaatti kan tajaajilu yoo ta'u abbaan Gadaatu godhata.
Nagaa Buusuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Kallachii fi caaccun araara buusuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Jaarsolii fi beerren kallachaa fi caaccuu qabatanii araara dubbatu. Meeshaalen kun namni firri jalaa du'e gadda isaanii dagatanii gara araaraatti akka dhufan godha jedhame amanama. Yeroo mariin araaraa godhamu, namoonni kallachaa fi caaccuu yoo argan nagaa akka bu'u sirritti itti amanu. Kunis, abaarsi warra araara diderraa ga'uu fi eebbi warra araara jaarsolii fudhataniif kennamu namooni akka sodaatan gochuun araara akka fudhatan godha.IDDOOSAA DABALAA
Araarri kallachaa fi caaccun dhufe cimaa ta'a. Ummata Oromoo keessatti, Abbaan Kallachaa fi Haati Caaccuu hawaasa keessa filatamanii meeshaalee kana qabaatu, meeshaalee kanaanis hojii hawaasumma fi siyaasaa akkasumas amantii raawwachiisu.
'Kallachaa' and 'Caaccuu' are ritual objects for peace and reconciliation in the Oromo society[dead link], dhumarratti kan baname: Gurraadhala 10, 2015
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Kallacha&oldid=37325" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 21 Muddee 2021, sa'aa 15:58 irratti.